Izindlela Ezifakazelwe Izinzuzo Zebhizinisi Lakho Elincane Ekumaketheni Kwezenhlalo | Martech Zone
Izindlela Ezifakazelwe Izinzuzo Zebhizinisi Lakho Elincane Ekumaketheni Kwezenhlalo
NgoLwesine, Juni 11, 2015 NgoLwesine, Juni 11, 2015 Douglas Karr
Ungamangala ukuthi, ngemuva kwazo zonke izifundo zamacala nobufakazi, kusekhona abakhohlisayo laphaya ezweni lamabhizinisi amancane abakholelwa ukuthi ezokuxhum kumane nje kuwukuchitha isikhathi. Ungangizwa kabi ... kungaba ukuchitha isikhathi. Uma uchitha isikhathi sakho ubuka futhi uthumela amavidiyo ekati, cishe ngeke uthole ibhizinisi eliningi.
Ngineqiniso lapho amabhizinisi okuqala ethola izingcingo, abaholi babekhathazekile ngokuthi abasebenzi bazovele baxoxe nabangane babo usuku lonke, futhi. Kepha manje akekho noyedwa obuza ukubaluleka kokukwazi ukuxhumana nebhizinisi ngocingo - kokubili okuphumayo noma okungenayo. Imithombo yezokuxhumana yehlukile ... yindlela yokuxhumana futhi incike kusu lenkampani yakho eliyisebenzisayo ukuyisebenzisa.
Uma ujoyina amaqembu, wabelana ngezihloko zenani elifanele, xhuma futhi ulandela abathonya, usize abantu abanezinkinga, ukhuthaze okuqukethwe kwakho, uqoqe futhi wabelane ngokuqukethwe okuhle okuvela kwabanye, ungakhulisa inethiwekhi enhle engahlinzeka ngeminyaka yemali engenayo.
Inkinga nokho akukhona ukuba khona kwezinkundla zokuxhumana kepha ukuthi la mabhizinisi ayisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana. Ngokombono webhizinisi elincane, ukumaketha imidiya yezokuxhumana kungaphezu kokuthola nje ukuthandwa, abalandeli, ukuphindwaphindwa kanye nokuphindaphindwa, kepha kunalokho ukuthola izinzuzo eziphezulu ezilandelayo, nokuningi, lokho kuzoba nomthelela omkhulu ebhizinisini. UJomer Gregorio, ukumaketha kwedijithali kweCJG.
Izindlela eziyi-8 zokumaketha kwezenhlalo ezuzisa amabhizinisi amancane
Ukwenyuka kwe-traffic yewebhusayithi.
Idala ukuhola ngezindleko eziphansi.
Kuqinisa ukumaketha kokuqukethwe.
Kwandisa ukuqwashisa ngomkhiqizo.
Yenza umkhiqizo wakho ube semthethweni.
Ikunikeza ukuqonda okukhulu kwezilaleli.
Kuthuthukisa ukwethembeka komkhiqizo.
Kuyathakazelisa ukuthi i-CJG isebenzise leli gama brand kuyo yonke i-infographic. Ngenkathi kunedatha eningi yokwengeza izinzuzo eziphelele zezinkundla zokuxhumana ngophawu oluthile, ngingasho ukuthi umthelela wakho ku- abantu kukhulu kakhulu. Imithombo yezokuxhumana akuyona umkhiqizo noma insizakalo ekhuluma kuwe evela ebhizinisini elincane, ngabantu bebhizinisi elincane!
Abantu banikeza ithuba lokuthembela nokuzibandakanya okungavunyelwe ngumkhiqizo wakho. Abantu bangakwazi, bakwethembe, bakubuze imibuzo, futhi ekugcineni bathenge kuwe. Umkhiqizo wakho uhlomula ngakho konke lokhu, kunjalo… kepha kungenxa yabantu bakho. Kumongo wayo, kunjalo social abezindaba, hhayi nje indlela eyodwa.
Tags: I-CJG Digital MarketingindawoinfographicIbhizinisi elincaneizinzuzo zokuxhumana nabantuimithombo yezokuxhumana infographic
Ukubikezela: Ibhizinisi Lakho Lizoba Yi-E-commerce Business